दिल टुटेको छ? योगद्वारा यसरी जोड्नुस् टुटेको मन « Lokpath
दिल टुटेको छ? योगद्वारा यसरी जोड्नुस् टुटेको मन
भन्ने गरिन्छ कि, बरु मन्दिर या मस्जिद तोड तर मन्दिर नतोड । यदि हामी कसैलाई चाहन्छौं भने अक्सर उसैले नै दिल तोड्ने गर्छ । जसकारण आफैले आफैलाई कमजोर महसुस गर्ने गर्छौं । तर, आफ्नो टुटेको मनलाई योगका माध्यमबाट पनि जोड्न सकिन्छ ।
ब्रेकअप भएपछि मन बारम्बार पुराना कुरामा जाने गर्छ । पुराना यादले पिरोलेर बेचैन बनाउने गर्छ । हर समय दिमागमा बितेका कुरा आउने गर्छन् । जसले मनलाई अझ बढी विचलित गरिदिन्छन् ।
आफ्नो मन र दिमागलाई शान्त गर्नका लागि खुला हावामा आफूलाई छोड्नुस् । ध्यान मुद्रा गर्दा पनि तपाईं ती पुराना कुराबाट बाहिर निक्किन सक्नुहुन्छ । जसलाई धेरै माया गर्नुुहुन्छ, उसलाई भुलेर फेरि आफ्नो शरीरमा नयाँ उर्जा ल्याउनका लागि भ्रामरी प्रणायाम गर्नुहोस् ।
सम्बन्ध टुटेपछि पीडा त हुन्छ नै । साथै हीन भावना पनि मनमा आउने गर्छ । आफ्नो आत्मविश्वासमा कमी आउने गर्छ । आफूले गुमाएको आत्मविश्वासलाई फेरि पाउनका लागि नटराज आसन गर्नुहोस् ।
अक्सर मान्छे मन टुटेपछि आफ्ना पछिल्ला कुरालाई लिएर रुमल्लिन्छन् र यस्तो गल्ती फेरि नगर्ने भन्ने सोच्छन् । यसलाई कम गर्नका लागि निद्रा आसन गर्दा आफूलाई धेरै राहत मिल्छ ।
अर्थात्, तपाईको तनावलाई कम गर्नका लागि ध्यान मुद्रा, भ्रामरी प्रणायाम, नटराजन आसन र निद्रा आसन गर्ने गर्नुस् । तपाईंका समस्या कम हुँदै जानेछन् ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१८,शुक्रवार १३:२७